ဟားဗတ်ဆေးကျောင်းမှတွဲဖက်ပါမောက္ခ Osama Hamdiy သည် Joslin Diabetes Center ၏ဆေးဆရာကြီးနှင့်ဒါရိုက်တာ၏ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုသုတေသနလုပ်သောသူ၏ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေဘဲများစွာသောအစားအစာများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
Osama Hamdiy ၏အစားအစာ၏အခြေခံစည်းမျဉ်းများ
Osama Hamdiy ၏အစားအစာ၏အဓိကအချက်မှာစားသုံးသည့်အစားအစာများ၏ကယ်လိုရီကိုလျော့ကျစေရုံသာမကပိုလျှံသောအဆီများကိုချေဖျက်ပေးသောခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပေါ်နေသောဖြစ်စဉ်များဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီလိုအစားအသောက်ကိုတင်းကျပ်တယ်လို့ယူဆတာကြောင့်၊ မင်းကအစားအသောက်နူးကိုချိုးဖောက်လို့မရဘူး၊ ခြွင်းချက်မထားနိုင်ဘူး။ မီနူးသည် ၄ ​​ပတ်ကြာရန်စီစဉ်ထားသည်၊ ထိုအချိန်၌သင်ပိုလျှံသောကိုယ်အလေးချိန် ၅ မှ ၃၀ ကီလိုဂရမ်အထိကျသွားနိုင်ပြီးသင့်တော်သောအာဟာရသို့ပြောင်းသင့်သည်။
Osama Hamdiy ၏အစားအသောက်စည်းမျဉ်းများ
၁။ သစ်သီးများ - နာနတ်သီး၊ apricot၊ မက်မွန်သီး၊ ကျွဲကောသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ကီဝီ၊ ဖရဲသီး၊ ဖရဲသီး၊ ဇီးသီး
၂။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (သာပြုတ်သည်)၊ အစိမ်းရောင်ပဲများနှင့်ပဲများ၊ ခရမ်းသီးနှင့် zucchini၊ မုန်လာဥနီနှင့် zucchini၊ စကွပ်။ တားမြစ်ထားသောအရာများမှ လွဲ၍ အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
၃။ အသားနှင့်ငါး ငါးသို့မဟုတ်ပုစွန်၊ ပြုတ်ထားသောသို့မဟုတ်စည်သွတ်ထားသောတူနာငါး
၄။ ပေါင်မုန့်၊ ဖြစ်နိုင်ရင်ကောက်နှံတစ်ခုလုံး (သို့) ကောက်နှံ။
သစ်သီးများ ၁ ။ ငှက်ပျောသီး၊ သရက်သီး၊ စပျစ်သီး၊ ရက်စွဲများ၊ သင်္ဘောသဖန်းသီးများ
2. ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ: အာလူး
3. အသား: အဆီများသောအသားနှင့်အဆီများသောငါး၊ သိုးသား။
Osama Hamdiy diet အတွက်မီနူးအမျိုးအစားများစွာရှိသည်၊ ၂၈ ရက်အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ၄ ရက်ခုနစ်ရက်ခွဲထားသည်။ အောက်တွင်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသည်၊ ထုတ်ကုန်များကိုလဲလှယ်။ မရပါ။
မနက်စာကနေ့တိုင်းအတွက်အတူတူပဲလား။ ကျွဲကောသီး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း + နူးညံ့သောပြုတ်ထားသောသို့မဟုတ်ပြုတ်ထားသောကြက်ဥ - ၂ လုံး
ပထမနေ့ - အမျိုးအစားတူအသီးများ။
ဒုတိယနေ့ - အသား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်၊ ကျွဲကောသီး - ၁ လုံး
တတိယနေ့-အဆီနည်းသောအဖြူရောင်ဒိန်ခဲ၊ ကောက်ပေါင်မုန့်၊ ခရမ်းချဉ်သီး
ပဉ္စမနေ့ - ကြက်ဥပြုတ် - ၂ လုံး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ဆဌမနေ့ - သစ်သီးများ။
ပထမနေ့ - ပိန်သောအသား။
ဒုတိယနေ့ -ကြက်ဥပြုတ် -၂ လုံး၊ ကောက်ပေါင်မုန့်၊ ကျွဲကောသီး
တတိယနေ့ - အသား။
စတုတ္ထနေ့ - အသား၊ အစိမ်းရောင်ဟင်းရွက်သုပ်။
ပဉ္စမနေ့ - ငါးပြုတ်၊ အစိမ်းသုပ်၊ ကျွဲကောသီး - ၁ လုံး
ဆဌမနေ့ - အသား။
သတ္တမနေ့ - ကောက်ညှင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။
Osama Hamdiy ၏ဒုတိယခုနစ်ရက်အစားအစာ
ပထမနေ့ - ကြက်ဥပြုတ် - ၂ လုံး၊ အစိမ်းသုပ်
ဒုတိယနေ့ - အသားသို့မဟုတ်ငါး၊ ဆလတ်။
တတိယနေ့ - ဒုတိယနေ့နှင့်တူသည်။
စတုတ္ထနေ့ - ကြက်ဥပြုတ် - ၂ လုံး၊ Feta ဒိန်ခဲ၊ ကောက်ညှင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ပဉ္စမနေ့ - ငါး (သို့) ပင်လယ်စာ
ဆဌမနေ့ - အသား၊ ဆလတ်၊ ကျွဲကောသီး - ၁ လုံး
သတ္တမနေ့ - ကြက်သား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်၊ ကျွဲကောသီး - ၁ လုံး
ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနေ့ - ကြက်ဥပြုတ် - ၂ လုံး၊ ကျွဲကောသီး - ၁ လုံး
စတုတ္ထ၊ ပဉ္စမ၊ ဆဌမနေ့ - သစ်သီးများ။
သတ္တမနေ့ -ကြက်သား၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကျွဲကောသီး ၁ pc
ပထမနေ့ - သစ်သီးများ
ဒုတိယနေ့ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ဆလတ်။
တတိယနေ့ - သစ်သီးများ (သို့) ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
စတုတ္ထနေ့ - ငါး၊ ဆလတ်။
ပဉ္စမနေ့ - ကြက်သား
ဆဌမနေ့ - သစ်သီးတစ်မျိုး။
သတ္တမနေ့ - သစ်သီးတစ်မျိုး။
ပထမဆုံးနေ့ - ကြက်အသား - ၂၀၀ ဂရမ်၊ ငါး ​​- ၂၀၀ ဂရမ်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီး၊ လိမ္မော်သီး - ၁ လုံး၊ ဂရိတ်ဖရု - ၁ pc
ဒုတိယနေ့ - ကောက်နှံတစ်ခုလုံးပေါင်မုန့် - ၂ ချပ်၊ သခွားသီးနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်၊ မည်သည့်အသီး - ၄ လုံး
တတိယနေ့တွင်ကောက်နှံပေါင်မုန့် - ၂ လုံး၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ (အဆီ ၀ ရာခိုင်နှုန်း) - ၁၀၀ ဂရမ်၊ လိမ္မော်သီး - ၂ လုံး၊ ဂရိတ်ဖရု - ၂ PCs ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပြုတ် - ၂၀၀ ဂရမ်၊ ခရမ်းချဉ်သီး - ၂ လုံး
နေ့လေး - ကြက်အသား? ကြက်သားအစိတ်အပိုင်းများ၊ သခွားသီးသုပ် -2PCs ခရမ်းချဉ်သီး - ၂ လုံး၊ လိမ္မော်သီး - ၁ လုံး၊ ကျွဲကောသီး - ၁ လုံး
ပဉ္စမနေ့ - ကြက်ဥပြုတ် - ၂ လုံး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်၊ ကျွဲကောသီး - ၁ လုံး
ဆဌမနေ့ - ကောက်နှံတစ်ခုလုံးပေါင်မုန့် - ၁ ချပ်၊ သခွားသီး - ၁ လုံး
သတ္တမနေ့ - ကောက်နှံပေါင်မုန့် - ၁ လုံး၊ ခရမ်းချဉ်သီး - ၂ လုံး၊ ငါး ​​- ၁၅၀ ဂရမ်၊ ကြက်သား - ၂၀၀ ဂရမ်၊ လိမ္မော်ရောင် - ၁ pc၊ ဂရိတ်ဖရု - ၁ pc၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် - ၂၀၀ ဂရမ်
တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးရေ ၂.၅-၃ လီတာသောက်ရန်လိုအပ်ပြီးသကြားမပါသောလက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီတို့ကိုခွင့်ပြုသည်။ ချိစ်အစားစားနိုင်ပါတယ် အဆီမပါသောအိမ်သုံးဒိန်ခဲဂရိတ်ဖရုသီးအစားလိမ္မော်သီးတစ်လုံး၊ ထုတ်ကုန်များ၏အလေးချိန်သည်အကန့်အသတ်မရှိပါ။ သို့သော် Osama Hamdiy ၏အစားအစာနှင့်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းသည်အံ့သြဖွယ်ရလဒ်များကိုပေးသည်။
အရေးကြီးသည်။ အစားအသောက်ကိုမလိုက်နာပါကပထမ နေ့မှစ၍ အားလုံးပြန် စ၍ နာတာရှည်ရောဂါများရှိလျှင်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Posted in, ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပ
prev strudels, tatenas နှင့် fillings အကြောင်း
နောက်တစ်ခု အဆီလောင်ကျွမ်းစေသောစွပ်ပြုတ် - ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အသုံးဝင်သောချက်ပြုတ်နည်းများစွာ
59 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,692 စက္ကန့်ကျော် Generate ။